A GA-Amalite Ịnwụchikọ Ụgbọala Adọbara n'Ebe Ezighị Ezi -- ATMA
E meela ka a mara na malite ugbu a dịrị gaba, na a ga-amàlitezị ịnwụchikọ ụgbọala ọbụla a dọbara n'ebe ekwesighị ekwesi n'okporo ụzọ ọbụla na steeti Anambra.
Onyeisi ụlọ ọrụ Anambra Traffic Management Agency, ATMA n'aha mkpirisi, bụ maazị Chris Ụzọechina mere ka a mara nke a dịka o mere ngagharị n'ụzọ awara awara ahụ siri Enugu gaa Ọnịtsha iji mara ka ọnọdụ agbakata a kwụrụ siri dị n'ụzọ ahụ. Ọ sịrị na ebumnobi nke a bụ iji wee bèlata ihe mberede okporo ụzọ, chụsịa ndị mmadụ na-anọchisi ụzọ ma mekwa ka éfè dị n'okporo ụzọ ọbụla, dịka ọ bụ otu n'ime ọchịchọ gọvanọ Willie Obianọ.
O mere ka a mara na ihe ndị ahụ so n'ihe na-ebutere ọtụtụ ndị mmadụ ihe mberede okporo ụzọ ma na-ewetakwa ọnwụ erughị eru nye ọtụtụ mmadụ, n'ihi na mgbe ụzọ chiere, ebe onye ụgbọala hụzịrị o sukanye isi ya, na-agbanyegị ihe ọ ga-ewe.
Ọ gakwara n'ihu kpọkuo ndị na-akwọ ụgbọala ka ha na-erubere ọkụ a gbakata a kwụrụ isi, ya na iwu ndị ọzọ na-achị okporo ụzọ, ma kwuo na onye ọbụla dara ya bụ iwu ga-enweta ntaram ahụhụ ịkwụnye ego ole a ga-agwa ya n'akara ụlọ akụ gọọmenti steeti ahụ, dịka ogoogo iwu ọ dara siri wee dị.
Maazị Ụzọechina nọkwazịrị na amụmà ngagharị ahụ wee chụsịa ọtụtụ ndị na-azụ ahịa n'okporo ụzọ dị iche iche, ma manyekwa ndị nọ n'akụkụ okporo ụzọ etinye ndị mmadụ n'ụgbọala ka ha kwagharịa ọnọdụ ma kwakọrọ ngwongwo ha si ebe ahụ pụọ ma baa n'ọdụ ụgbọala, bụkwazị nke e mechaara, ebe niile wee chakee ozigbo dịka éfè na ohere batara n'okporo ụzọ niile dị na mpaghara ahụ ozigbo ozigbo; ndị mmadụ na ụgbọala wee na-agara onwe ha siriri werere.